Yiba ngumthengisi futhi - Jinhua Ecubmaker Technology Co., Ltd.
Ngokuthuthukiswa kobuchwepheshe bokuphrinta be-3D, izinhlelo zephrinta ze-3D zithandwa kakhulu empilweni yabantu yansuku zonke. Kubukeka kuyithuba elihle lokuthola imali nokwakha umsebenzi wakho emhlabeni omusha. Ukuba ngomunye wabakhiqizi bokuqala emakethe ye-3D yokuphrinta, sinolwazi kwezocwaningo, ukuthuthukiswa nokumaketha. Ukuze kwenziwe lula abantu ukuthi bajabulele ubumnandi bamaphrinta e-3D, futhi kwenze kube lula kakhulu ukuthi abalandeli bethu be-EcubMaker 3D basebenzise amaphrinta, i-EcubMaker ifuna abathengisi, abasabalalisi nabathengisi emhlabeni wonke! Njengoba, amakhasimende ethu ahlanganisa yonke imisebenzi namakhono, njengabathengisi bezitolo, abathengisi, abasebenza kwezemfundo, njll. Akunandaba ukuthi unesifiso sokuqala ibhizinisi lakho, noma uneminye imibono emihle ngephrinta ye-3D. Uma ucabanga ukuthi unolwazi oluningi lokusebenzisa uhlobo lomkhiqizo. Isevisi ye-OEM iyatholakala. Wamukelekile ukuba uhlanganyele nathi njengamanje. Njengenkampani ehamba phambili yokucwaninga neyokuklama yokuphrinta okungu-3d, sihlala sithatha ikhwalithi phambili, sigxila ekwenzeni iphrinta engcono kakhulu ngokusebenza okuphezulu, nokunikeza insizakalo enhle kuwo wonke umuntu. Nonke namukelekile ukuthengisa imikhiqizo yethu. Inhloso yethu ukuvumela ukwethenjwa kwakho kube yingcebo. Sifuna ukuthola isimo sokuwina futhi sakhe ubuhlobo besikhathi eside.
I-EcubMaker 3D Technology, esungulwe ngo-2013, igxile ekuhlanganiseni ucwaningo lwe-3d, ukuklama, nokuhweba ngokuphelele. Ngaphezu kwalokho, amavidiyo wokuhlola ephrinta we-EcubMaker abone amakhulu ezinkulungwane zokubukwa ku-YouTube. Amawebhusayithi amaningi wokuphrinta we-3D ahlolisise kakhulu amaphrinta ethu, asilinganise njengophawu lwenani olungcono kakhulu izikhathi ezimbalwa, njengeGadget Flow, iRoboturka, i3Dpc.com njalonjalo.
2. Ubuchwepheshe Nokusekelwa Kwensizakalo
Ithimba le-EcubMaker R & D lonjiniyela abanekhono kakhulu linolwazi olunzulu lokujula kokuphrinta kwe-3D okufakwe ukunikeza ubuchwepheshe obuchwepheshe. Okwamanje, insizakalo ehamba phambili yokuthengisa futhi enikezwe ochwepheshe be-EcubMaker 3D. Sineqembu lethu lesevisi esezingeni eliphakeme emva kokuthengisa, elinamathela kumqondo "Wezindaba Zamakhasimende" ngohlelo lwensizakalo olufanayo lokusebenza kahle okukhulu, okulula, nokwenza izinto obala. Kuze kube manje sinedumela eliphakeme ekusekelweni kwethu kokuthengisa ngemuva impendulo yabo esheshayo nokubambisana ngobungane.
3. Quality okuqinisekisiwe
Yonke imikhiqizo yethu idlule izitifiketi eziningi zekhwalithi nezemvelo zamazwe omhlaba ezifana ne-FDA, CE, FCC, ne-ROHS, njll. Sibeke imigomo emithathu ngaphakathi kwenkampani. Zonke izingxenye zivivinywe kaningana ngaphambi kokuba zipakishwe futhi ithimba lethu lokulawula ikhwalithi elinolwazi liye lahlolwa isikhathi eside kuwo wonke amaphrinta ukuqinisekisa ukusetha ngomkhumbi. Ukufinyelela esigabeni sokupakisha sokugcina yonke iphrinta idinga ukudlulisa konke ukuhlolwa kokulawulwa kwekhwalithi ngaphandle kwalokho siyithumela umnyango wokwenziwa kabusha. Ibhokisi ligcwele i-Styrofoam esezingeni eliphakeme ukuvikela iphrinta ekufudukeni okuphezulu futhi kufanele kudlule esivivinyweni sokukhuthazela ngaphambi kokulungela ukuthunyelwa. Ngakho-ke noma ngubani angaqiniseka ukuthi iphrinta izofinyelela endaweni ngaphandle kokulimala kwangaphakathi ngokuhamba.
4. Intengo Yezomnotho
Sikholwa ukuthi amaPrinta ethu enzelwe zonke izigaba zabantu. Asikaze sicabange ngezici ezithile zamakhasimende. Ngakho-ke cabanga ngentengo ngokwenzuzo encane futhi unikeze insizakalo enhle yesigaba ngasinye. Intengo yemikhiqizo yethu ishibhile kunephrinta yesigaba esifanayo njengamanje. Njengoba sifuna ibhizinisi lesikhathi eside, sifuna ukuthola ukwethenjwa hhayi nje ukucabanga ngenzuzo. Lokho okulindelwe yi-EcubMaker ukwenza lula wonke umuntu ukuthi azi ngobuchwepheshe bokuphrinta be-3D futhi ajabulele ukuzijabulisa enza amaphupho abo afezeke. Ungangabazi ukuxhumana nathi ngentengo eshibhile uma ukuthenga ngobuningi kudingeka. Ngokusizakala kokuthenga ngobuningi nokuphathwa kokuthengiswa okuphambili, i-EcubMaker inciphisa kakhulu izindleko zemikhiqizo ukuqinisekisa inzuzo yabathengisi, ukusiza abasebenzisi bokugcina ukuthi bonge imali.
Yini esiyilindele kuwe?
• Ukuqonda kangcono ngePrinta oyifunayo.
• Sitshele ngohlelo lwakho lwebhizinisi nenkampani yakho.
• Bambisana nathi mayelana nentengo. Njengoba sihlala sikunikeza intengo yokuxoxisana kakhulu kuwe.
• Thuthukisa isiko lethu lomkhiqizo ne-3D lokuphrinta ngenkuthalo.
• Uma unentshisekelo yokwehla, siqotho kakhulu ukubambisana nawe.
Bhala lapha: Sales01@zd3dp.com
Xhumana nathi nokho le imeyili. Sikhululekile ukusitshela ngawe nokuthi singabuhlakulela kanjani ubudlelwane bebhizinisi besikhathi eside. Silangazelele i-imeyili yakho. Impendulo uzoyithola ngokushesha nje lapho siyithola. Ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho.